Marc Ravalomanana: Miantso ny Malagasy mba hifanampy amin'ireo traboina sy hiara-hanarina ny simba
samedi, 25 janvier 2020 22:16
Nanao fikaonan-doha tetsy amin’ny Carlton Anosy ny mpanohitra mivondrona amin’ny vovonana RMDM (Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara), ivondronana antoko miisa 21.
Nandritra ny lahateny fanokafana nataon’ny filohan’ny RMDM, Marc Ravalomanana no nanaovany teny fiaraha-miory amin’ireo fianakaviana izay namoy Havana sy fiombonan’alahelo amin’ireo izay very fanànana, ary indrindra voatery nandao ny toeram-ponenana noho ny loza mitranga.
Nanao antso ho an’ny vahoaka Malagasy ihany koa ny tenany “mba hifanampy amin’ireo sahirana, ary hiaraka hanarina ireo fahasimbana izay misy any amin’ny toerana misy ny tsirairay any”, na eo aza ireo rafitra misy eto amin’ny firenena izay natokana hanao ny famonjena maika ireo tra-boina sy ireo niara-doza. Misy ihany koa ny rafim-panjakana natao hanarina haingana ireo fotodrafitr’asa simba, koa inoanay fa efa samy mandray ny andraikiny izy ireo.
Nampahatsiahy i Marc Ravalomanana fa “tsy hanao fanoherana bontolo” ny RMDM fa hanao kosa ilay antsoina hoe : “opposition constructive”. Andraikitry ny mpanohitra no mitsikera ny asan’ny mpitondra, hoy izy.
Eo amin’izay indrindra dia mahita izahay RMDM, hoy izy, fa “mizotra any amin’ny làlana tsy tokony hizorany ny firenena ankehitriny ka tsy ny tombotsoam-bahoaka no atao laharam-pahamehana fa izay mahafinaritra ny mpitondra fotsiny, na ihany koa ny fiarovana ny tombontsoan’ireo olombitsy fotsiny”. Tsy afaka ny hangina fotsiny amin’izao izahay mpanohitra manoloana izany fitantanana firenena tsy mahomby izany fa tsy maintsy mijoro izahay ho arofanina.
Nanao antso avo amin’ny vahoaka Malagasy, ny RMDM, nilaza fa “aza variana amin’ny mahafinaritra isika fa katsaho hatrany ny mahasoa. Mifohaza eo amin’ny torimaso ianareo, zon’ny tsirairay no mitaky fanazavana amin’ny mpitondra eo amin’ny fitantanana tsy manjary. Tsy maintsy misy ny tamberin’andraikitra ny fitondrana fa tsy voahozona ahantra akory isika Malagasy”.